Etu esi ewepu udiri nwanyi n’uzo dika ihe ozo si di na 4-usoro? - GHỌRỌ AYBỌCH.
Etu esi ewepu udiri nwanyi n’uzo dika ihe ozo si di na 4-usoro?
NDỤMỌDỤ SITEÀgwà ọmaMỤRỤ M
By Chinde	 emelitere ikpeazụ June 13, 2020
Na ụkpụrụ, ọ bụrụ na ahụike siri ike, nwanyị ahụ na-enwe obere isi oge niile. Agbanyeghị, ọ bụrụ na isi a siri ike ma ọ bụ jọgburu onwe ya, ọ nwere ike bụrụ nsogbu ahụike, ọkachasị ma ọ bụrụ na isi ahụ na - eso ihe mgbaàmà ndị ọzọ dị ka itching, ọkụ, iwe ma ọ bụ nzuzo. Ọnụnọ isi nwanyị bụ ihe na-akpasu nwanyị iwe mgbe niile. Nke a ga-emetụta ọ bụghị naanị ahụike nwanyị ahụ, kamakwa ọ na-akwanyere onwe ya na ntụkwasị obi onwe ya ugwu. Yabụ otu esi ewepụ isi ndị na-esi ísì ụtọ n'ụzọ nke ndụ
ebe a bụ usoro ọgwụgwọ anọ nke ga-enyere ụmụ nwanyị gbara aka aka iwepu ntutu isi. Ndị nne anyị na-eji, ọgwụ ndị a ga-enyere gị aka iwepụ ọ bụghị naanị ísìsì kamakwa ọ bụ ọrịa nje na-ekwe omume
# 1: guava doo
Otu n'ime ụzọ kachasị dị mma iji kpochapụ ísì ọjọọ na ndabara bụ iji ya Guava apụNdị a bụ antioxidants, antibacterial ma nwee ihe na-akpata mbufụt.
Ejiri ya n'ọtụtụ narị afọ na ọgwụ ọdịnala, a na-eji akwụkwọ guava mee ihe n'ọtụtụ ebe iji kwụsị mmiri na oke isi.
Kedu ihe ị chọrọ
Otutu ahihia guava
Otu lita mmiri
Ghichaa akwụkwọ guava
Obụpde akwụkwọ ịsacha na otu lita mmiri ruo mgbe mmiri jiri ọkara belata
Ka jụụ ma dozie infusion
Ilezọ ụlọ ọgwụ na mkpụrụ ọgwụ ugboro iri abụọ na abụọ otu otu izu, kwugharịa ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
# 2: Mmiri Soda
Sodaụ b soda na-enyere aka mee ka ahụ gị dị n ’pH, nke na-ebuso isi na-adịghị mma na mpaghara gị. Ozugbo ị chịkwaara ma dokwaa otu pH nkịtị, isi ahụ ga-amalite iwelata.
Gwakọta ½ iko mmiri soda gị na mmiri ịsa ahụ gị.
Sook ahụ gị dị ala nkeji iri abụọ.
Jiri akwa nhicha dị ọcha were aka gị.
Ihe ngosi ugbu a: 'Mmekọahụ Mòbil dị iche, SMS' -…
Groupe RRDP - Imepe agbamakwụkwọ nye ndị di na nwunye ...
Mmekọahụ n'etiti ọkara ụmụnne ka a na-ewere dị ka…
Nke a ga - ekpochapụ isi na ọgụ ozugbo yist ọrịa.
# 3: yogọt
Yogọt bara uru n’imeso isi ísì n’ihi na o nwere nje lactobacillus nke nwere ike ịlụ ọgụ Ọrịa Candida. Ọrịa Candida bụkwa otu n'ime ihe na-akpata isi ísìsì. Na mgbakwunye, akụkụ nke yogọt a na-enyere aka weghachite pH nkịtị na nwanyị iji wepụ isi na-adịghị mma.
Were onwe gị iko mmanya abụọ dị larịị, nke yogọt a na-eteghị ete n’ụbọchị.
Zinye tampon na yogọt larịị ma tinye ya n'ahụ gị site na ikpu nwanyi.
Hapụ ya ebe ahụ ka awa ole na ole.
Mgbe ị wepụrụ tampon, hụ na ị ga-asa ya nke ọma.
# 4: Tinye galiki galiki
Garlic bụ ọgwụ antimicrobial na okike. O nwere onyinye akpọrọ allicin nke na - enyere aka ịlụ ọgụ nje bacteria. Can nwere ike iji galik dị ka ọgwụgwọ dị mma iji kpochapụ ọrịa na isi.
Were ghee galik 3 ruo 4 ma ghee ya na mado.
Gbunye mado gị niile ma hapụ ya ka ọ bụrụ aka elekere abụọ. O nwere ike ịgbanyetụ ntakịrị, mana ọ ga-agbada mgbe nkeji iri gachara.
Ituchapu ya na mmiri ma kọọ nkụ.
I nwekwara ike were galik peeled, kee eriri pere mpe n’akụkụ ya tinye ya n’ime ikpu. Hapụ ya n’abalị.
Chịkọta pọd ahụ n'ụtụtụ tupu ịsa ahụ.
Mee ya otu ugboro n ’ụbọchị iji wepu isi ure n’ime otu izu.
You nwere ike ịgbanwe ọgwụ 4 ndị a ma ọ bụ jiri nke kachasị dịrị gị mma ma yabụ iwepụ isi na-esi ísì ụtọ n'ụzọ ebighi ebi ga-abụ ikuku.
isi mmalite: https: //poteleemagazine.com/se-debarrasser-des-odeurs-vaginales-de-facon-naturelle/
Chinde 1525 posts 0 comments
Charmer na flirty: François Mitterrand onye aghụghọ na-enwe ọtụtụ mmeri
Mgba ike na njigide na-awụ akpata oyi n'ahụ nke onye isi ụmụ amaala na Canada, na-eme ka a mata ịkpa ókè agbụrụ
Ọ lụrụ nwunye ya anọ n'otu ụbọchị ahụ n'ihu onyeisi obodo
Ụmụ akwụkwọ abụọ nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ na Bagangté
"Morocco enwekwaghị arụmọrụ gọọmentị" - Jeune Afrique
Na Algeria, usoro ahụike nọ na ntiwapụ nke mgbawa - Jeune Afrique